Refractometer Stress kala duwan, Polarimeter oogada Stress, Tin Side dhaanta - Jeff
La aasaasay 2015 by Jeff Li, Jeffoptics Soha bixinta qalabka fasalka ugu horeeya dunida macaamiisha. alaabta waxaa lagu gartaa xalinta sare, si deg deg ah jawaab, adag oo ay fududahay in hawlgalka. Hadafkeenu waa in la siiyo qalab xirfadeed, sax ah iyo si sahlan-shaqayn macaamiisha si ay u sameeyaan waxyaabaha ay gaaraan tayada ugu fiican.
Iyada oo ku saleysan suuqa-weyn ee Shiinaha, Jeffoptics waxaa ka go'an inuu u adeego warshadaha galaas, bixinta shirka qalabka looga baahan yahay macmiilka. Qaadashada faa'iidooyinka ah qoto-dheer aqoonta farsamo iyo maal-Research & Development adag, Jeffoptics ayaa soo saaray noocyo kala duwan oo qalab cabbirka stress galaas xakamaynta tayada galaas oo ay ku jiraan meter stress dusha, ku laayeen meter stress, stress badan oo meter view, hagaajiyey aqoonsi dhalooyinka iyo head- qalabka baaritaanka qaab leh cabbirka deceleration.
Khibrad iyo dareen naqshadeeye interface user soo jeeda design dhexgalka.
Jeffoptics noocyo kala duwan oo qalab loogu talagalay gacanta ku tayada galaas oo ay ku jiraan dusha meter stress, ku laayeen meter stress, stress badan oo meter view, hagaajiyey aqoonsi dhalooyinka iyo ...
la talinta iyo taageero Technical
Jeffoptics bixisaa cabbirka stress dhalooyinka iyo nidaamka tayada galaas tasho adeegga. Waxaan sidoo kale ku siin R & D adeega qalabka aan caadiga ahayn.
Tan iyo markii ay soo socda suuqa, Taxanaha JF ee mitir stress dusha galaaska loo isticmaalay by tempering dhirta dhalooyinka, machadyada shahaado awood iyo ...
JF-1 taxane dusha galaaska meter stress
JF-2 taxane Meter oogada Stress
JF-3 dusha mitir Walwalka